Garoowe Mid kamid ah Xildhibaanada Cusub ee dhawaan la doortay oo Geeriyooday | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Garoowe Mid kamid ah Xildhibaanada Cusub ee dhawaan la doortay oo Geeriyooday
Allaha u naxariistee waxaa xalay magaalada Garawe ee caasimada Maamulka Puntland ku geeriyooday Xildhibaan Daahir Xaaji Geelle oo katirsanaa Xubnaha Aqalka Hoose ee dhawaan la doortay sidoo kale kamid ahaa Baarlamaanka Waqtigiisa dhamaaday.
Geerida Xildhibaanka ayaa la sheegay in ay aheed mid kadis ah, waxaana la sheegay kahor inta uusan geeriyoon in uu si caadi ah ula caweenayay asxaabtiisa oo ku sugneed Hotel kuyaala magaalada Garawe.
Xildhibaanka ayaa la sheegay in qolkii uu ka degnaa Hotelka uu kasoo baxay isaga oo wadnaha ka sheeganaya waxaana la sheegay in xiligaas kadb nafta ka baxday uuna ku geeriyooday Hotelkii uu degnaa.
Wali lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysay geerida Xildhbaankan katirsanaa Baralamaanka cusub ee la doorta balse aan la dhaarin, waxaana geeridan ka naxay asxaab badan oo aad u taqaanay Xildhibaanka.
Xildhibaanad Naciima Maxamed Gacal oo aad u taqaanay Xildhibaanka kana wada tirsanaayeen Baarlamaana Carabta ayaa sheegtay in Xildhibaan Daahir uu ahaa Shaqsi aa u wanaagsan waxa ayna uga tacsiyeesay eheladii iyo asxaabtii uu ka geeriooday Xildhibanaka, waxa ayna sheegtay in ay aad uga naxday markii ay maqashay geerida Xildhibaan Daahir oo ay wada hadeyn kahor geeridiisa.
Hase yeeshee waxaa durba soo baxaya tuhun ah in xildhibaanka la sumeeyey oo ay dileen dad doonaya iney jagadaasi oo tan iyo 2009 hayey kala wareegaan.
Arrintan ayaa waxay gaartey maamulka Puntland oo degdeg si hoose ugu magacawday guddi la sheegay iney baaritaan ku sameyn doonaan dhimashada xildhibaanka.